SAWIRO-Muuse Biixi:Murashaxa Ayaa Khudbado Kala Duwan U Jeediyay Jaaliyada Magaalada Birmingham | Eryal Tv
Home News SAWIRO-Muuse ...
SAWIRO-Muuse Biixi:Murashaxa Ayaa Khudbado Kala Duwan U Jeediyay Jaaliyada Magaalada Birmingham
Birmingham, UK (ERYALTV) Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday Magaalada Birmingham, ayaa ujeedada xafladu waxay ahayd sidii loo soo dhoweyn lahaa, Wafti heer sare ah oo uu horkacaayo Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Ahna Murrashaxa jagada Madaxweynaha Xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi. Xafladdaasi oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa waxaa ka soo qeyb-galey, qeybaha kala duwan Bulshada ka midda Sida:- Tageerayaasha Kulmiye iyo Jaaliyadda Somaaliland ee ku dhaqan Magaalada Birmingham iyo waliba qaar kale oo ka yimid daafaha iyo dacalada waddankan United Kingdom.
Waxayna reer Birmingham habeenkaasu u ahayd habeen taariikhi ah oo dadka Tageerayaasha Xisbiga Kulmiye ay ka muuqatay qiirro kalgacal iyo wadaniyad cod dheer lahayd. , iyagoo ku farxsanaa soo dhoweynta Weftigooda ee Murrashaxa jagada Madaxweynaha Kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka mid ahaa weftigii uu hogaaminayey Madaxweynaha JSL Md Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Xafladaasi oo ay isku dubaridkeeda lahaayeen Gudida isku duuban ee Kulmiye Laanta Birmingham ayna hormood ay ka ahayeen :-
Gudoomiyaha Md Maxamuud Xirsi Duduu Iyo Gudoomiye Ku-xigeenka Md Fariid Diiriye Nuur : Waxaa ugu horayn lagu furay Aayadaha quraanka kariimka ah,waxaana akhriyey Sheekh Maxamed Xujaale. Ka dibna: Gudoomiyaha iyo Ku-Xigeenkiisa Laanta Kulmiye ee B.ham:- ayaa mahad balaadhan u soo jeediyey dadkii kala qayb -qaatay qabsoomida xafladaasi , iyagoo mahad weyn u jeediyey iyagana dadkii ka soo qayb-galay iyo weftiga sare ee Kulmiye ee heer qaran . kuna soo dhaweeyey Weftiga uu hogaaminaayey Murashaxa Xisbiga Kulmiye Md Muuse Biixi Magaaladda Birmingham , waxaana ay sheegeen in Magaaladdu ay tahay : “
XISBIGA KULMIYE meelaha uu ka soo jeedo ama aasaaska u ah . ugu danbeyn :- Hormoodka Gudidda Kulmiye: Waxay ku booriyeen Tageerayaasha kulmiye ,in loo diyaar-garoobo tartanka doorashada haday dhinac farsamo iyo dhaqaalaba tahay. iyagoo ka-dibna ka waramay Ujeedada xafladda iyo Booqashada weftiga Gudoomiyaha kulmiye ahna Musharaxa madaxweynaha Md Muuse Biixi, ka-dibna waxaa lagu soo dhaweeyey : Gudoomiyaha jaaliyadda Birmingham Md Cumar Cabdilaahi Yaasiin : –
Waxuuna sheegay in jaaliyadda Birmingham ay caan ku noqotay , in Masuul-kasta oo madax ah. si isku duubni ah , isla-markaana wadaniyadi ku dheehan-tahay lagu soo dhaweeyo, Mudane Cismaan kheyre :=-oo isagu ka soo jeedday G/Togdheer gaar ahaana degaanka Buuhoodle, ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii ka hadashay , waxuuna ugu horeyn u hambalyeeyey Murashaxa Madaxweynaha xisbiga Kulmiye: Md Muuse Biixi, waxaana ugu hambalyeeyey Xisbiga Kulmiye ee uu ka sharaxan-yahay mid maanta caan ku noqday :-
Horumarka Iyo Nabadda ka socota Gobolada Bariga gaar ahaan degaamadda Buhoodle Iyo G/Sool oo aan ku hambalyeynaayo ayuu yidhi. Waxaa isna halkaasi gabay cajiiba ka jeediyey Abwaan Cabdi Maxamud Cilmi “Baraar” :- Gabaygan oo aad qurux badnaa . ayaa ahaa mid munaasibada aad u khuseynaayay , isla-markaana ku saab-sanaa doorashada iyo waayihii ama halgankii la soo maray. Abwaan baraar ayaa ka mid ahaa :
Abwaanadda caanka ah. Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee UK Md Xariir Xirsi Adar-. ayaa isaguna ka hadlay xafladda, isagoo sheegay in dhamaan tageerayaasha Kulmiye ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska , laynooga baahanyahay ayuu yidhi: diyaar-garow fiican iyo in si dhameystiran aan u dedejino waxyaabaha muhiimka ama waajibka ina saaran : gaar ahaan dhaqaalihii doorashada ama doorkeenii aan ku lahayn. Waxaana ka-dib halkaasi ka hadley qaar kamid ah waftiga ballaadhan ee la la socday Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye, sida Wasiirka Madaxtooyada Md . Maxamuud Xaashi Cabdi .
Wasiirka Caafimaadka Dr Saleeban Ciise Axmed Xaglo-Toosiye.Wasiirka wasaarada xanaanda xoolaha Somaliland Md, Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse kuwasoo halkaasi kasoo jeediyey khudbado qiimo iyo xikmad iyo Kaftan ku fadhiyey , isla-markaana dhinacyo badan taabaneyey. Wasiirka Wasaarada Xanaanda Xoolaha Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse:- Ayaa ugu horeyn waxa uu aad u amaanay firfircoonida Jaaliyadda Birmingham , oo warkeedda aan hayey ayuu yidhi, isagoo sheegay in la wada ogsoonyahay oo aan cidina dafiri karin . sida ku cad ee markhaatiga leh maanta – Mar uu ka hadlaayey horumarka JSL ,waxuu yidhi .
Waa wax muuqda in dalku ku talaabsaday horumar markhaati aad ka tihiin oo dhinacyo badan leh. Wasiir Cukuse ayaa sheegay in xukuumadda kulmiye guulo la taaban-karo ka gaadhay Nabadda iyo Horumarka JSL , waxuuna tusaale u soo qaaday Wasiirka caafimaadka Xaglo’toosiye oo uu sheegay in uu shalay ahaa Mucaarid Hogaamiye sare ahaa , isla-markaana Maantana uu yahay Wasiir Somaliland ah . taasina waxay markhaati u tahay in ay ka go,antahay Xukuumadda kulmiye in nabad buuxda la gaadho. sidaa daradeed ,
Sunahaasi ciddii sii wadi lahayd ayaan u baahanahay waana Xisbiga Kulmiye ayuu yidhi wasiir Cukuse. Wasiirka Caafimaadka Dr Saleeban Ciise Axmed Xaglo-Toosiye. Ayaa kaftan badan ka dib. Isaguna sheegay in Wax-qabadka Xukuumada Kulmiye : loo arkaayo ayuu yidhi. sida cadceeda oo kale ayna cadahay xukuumadda Kulmiye waxqabadkeedu. Waxaan leeyahay ayuu yidhi: Waa la tijaabiyey Kulmiye 6sano oo waxqabad ah ayey sameeyeen. Nabada iyo Horumarka dhinaca Mashaariicda ka socota dalka , gaar ahaan goboladda bariga in la dhameystiro , ayeynu u baahantahay ciddii hawshaa dhameystiri lahayd. Hadalada Wasiirka Madaxtooyada Md Maxamud Hashi Cabdi :-
Waxaa ku jirtey khudbadisii mahad-celin u soo jeediyey Madaxa weftiga (Murashaxa Xisbiga Kulmiye) iyo dadweynihii ka soo qayb-galayba, Wasiirka Waxa uu ugu Horayn hadalkiisa ku bilaabay Mahadnaq ” Waa soo dhawayn wanaagsan oo aad u diiran weeye, isagoo sheegay inuu u Mudan-yahay Gudoomiyaha Kulmiye. Wasiir Maxamuud : – wuu qiray inay amaan mudan-yihiin tageerayaasha Kulmiye ee Birmingham:waana lagu yaqaanay beena maaha , wuxuu yidhi ninkii jiray “
Allow Habarta si ma loo aasay? iyo waa hadii axankuna raaco.” soo dhawayntu way wanaagsan tahay ayuu yidhi.Wasiir .Maxamud Hashi . laakiin shaqada kale ee hadhay yey idinka xumaanin. wasiirka ayaa sheegay , inay shaqo badan u taallo B,ham iyo magalooyinka kaleba isla markaana loo baahanyahay inay ka soo baxaan waajibkoodda .siiba tageerayaasha Kulmiye ee qurba-joogta ah in looga baahan yahay sidii lagu yaqaanay: taageero dhinackasta leh siiba hawlaha Xisbiga iyo inay muujiyaan dedaal badan.
Wasiirka Madaxtooyada : Ayaa Xisbiga Kulmiye markuu sharaxaayey ayuu sheegay . waa la ogyahay manafestaddii hore waanu fulinay waxii ku qornaa ,waxaana aanu ahayn xisbiga keliya ee barnaamij cad lahaa ,
waxaanu markasta tusaale u noqon-karna xisbiyadda kale inay naga deydaan ayuu yidhi. isagoo sheegay Wasiirka Madaxtooyaddu : in Xisbiga Kulmiye yahay Xisbi gaamuray .isla-markaana 8sano Mucaarad iyo 6Sano Muxaafid= 14sano oo waayo aragnimo ah uu leeyahay, waxaa nagu duugan ka Kulmiye ahaan. ayuu yidhi. waxyaallo badan oo cid kale .nala wadaagin sida :- Tanaasul iyo Samir iwm dhaliil-lama waayo waxaa aanu qabanay ayaanu cidkasta dheernahay,Waxuu sheegay in tageerayaasha Kulmiye inay xoog-badan yihiin way muuqan doontaa inshalaah maalinteedda ayuu ku soo koobay
Wasiir Maxamuud hadalkiisii,,,,,,. Wasiir Maxamud Xaashi :- ayaa halkaasi ka iftiimiyey Siday Xisbi ahaan isugu diyaariyeen Doorashooyinka Madaxtinimo ee Somaliland ka qabsoomi doonta Sannadka Cusub ee 2017 : waxuu yidhi Xisbiga Kulmiye tartanka iyo doorashaba maanta waa u diyaar, dabadana ma hayno, waxaanu diyaar u nahay ayuu yidhi wasiirku . inaan doorasho xalaal ah dalkan ka qabano, masuuliyada nagaga beegana aan gudano, haday doorashooyinkii hore dib u dhaceenna Kulmiye dib uma ridin ee sababo farsamo ayey dib ugu dhaceen ayuu , haday maanta kala hadheen ayuu yidhi wasiirka madaxtooyadda : labada doorasho sababo farsamo ayey u kala hadheen: oo ah kuraastii golaha Wakiilada sidii loo qaybsan lahaa ama dadka Somaliland-na ugu midoobi lahayd, ayuuna Madaxweynuhu tixgaliyey . sababo ay ka mid ahayd in ay ku adkaatay golahii wakiiladda ee u xil saarnaa inuu qaybiyo kuraastaa , isla-markaana uu xeerkeediina diyaariyo markii ay ku adkaatay inuu arintaa sameeyo mudo dheerna uu horyaalay.Xisbiyadduna ay dib ugu soo ugu celiyeen Madaxweynaha. ayaa taasi xal noqotay. Intaa kadib-
Wasiirka Madaxtooyada Md Maxamud Hashi Waxaa uu hadalka ku soo dhaweeyey ugu dambeyntii ama lagu soo gabegabeeyey:- Gudoomiyaha Kulmiye ahna musharaxa xisbiga kulmiye Mudane Muse Biixi Cabdi . Waxaa Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Ahna Musharaxa madaxweynaha. Md. Muuse Biixi wuxuu uga horeyn u mahadceliyey dadweynihii reer Somalilland ee sida sharafta leh ugu soo dhoweeyey Britain markii u horeeysay ee uu yimaado gaar ahaan Magaaladda Birmingham , isla-markaana wuxuuna si gaar ah amaan iyo bogaadin badan u jeediyey qaban-qaabiyayaashii munaasabadan siiba Gudida Kulmiye Magaalada Birmingham.
Murashaxa Madaxweynaha JSL: Md Muuse Biixi Cabdi. Ayaa Jaaliyadda reer Birmingham uu ugu baaqey iney noqdaan horseed lagu daydo oo wax weyn ka tara dibu-dhiska dalkooda hooyo. Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye :- ayaa wuxuu caddeeyay in xisbiga Kulmiye isbedel muuqda ka sameeyey Horumarka dalka, gaar ahaan siyaasadda dhaqalaha gudaha iyo tan dibadda. Xisbiga Kulmiye wax badan ayuu qabtay ayuu yidhi waxna way u dhiman-yihiin dhinaca arimaha Bulshada . isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhinaca baahiyaha Biyaha . waanay muuqataa oo way jiraan wax badan oo la qabtay ayuu yidhi . waana markhaati ma doon , dad badan oo karti lihina hawsha way wadaan. taasina waxay keentay in Xisbiga KULMIYE yahay Xisbiga ugu taageero badan Xisbiyada Somaliland waana xisbi qaran oo dad badan kulmiya. waxaa intaa u dheer Kulmiye ayuu yidhi . Murashaxa Madaxweynaha Xisbiga Kulmiye. waxuu haystaa Xisbigu .
Ruug-caddaa Siyaasadeed ama Hogaamiye adag. dhinaca tageerada markuu ka hadlay Musharaxa Xisbiga Kulmiye. waxuu sheegay in maanta maalin uu ka xoog badan yahay xisbigu aanay jirin sababahaa aan soo sheegay awadeed ayuu yidhi. Md Muuse Biixi ayaa sheegay : In Xisbigu markasta uu xooga saaraayo :- Aqoon-tayo leh, oo Horumarisa Bulshada, Dhaqaalaha, Amniga iyo Siyaasadda, .Siiba Ilaalinta iyo Xoojinta Amniga qaranka waa muhimada kowaad ee Xisbiga Kulmiye., Ugu Danbeyn: – Musharaxa Madaxweynaha Xisbiga Kulmiye . Md Muuse Biixi cabdi : Waxuu kula dardaarmay Tageerayaasha Kulmiye ee qurba-jooga inay door ku leeyihiin codadka doorashadda dadweynaha ama sameyn balaadhan . sidaa daradeedna ay doorkoodda ka qataan , haddii ay dhinac-kasta noqoto. Ma ahayn wax qoraal lagu soo koobi karo khudbaddihii weftigii uu hogaaminayey Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye
Ahna Murrashaxa jagada Madaxweynaha Kulmiye Geba-gabadii xafladdaan ballaadhan ayaa waxaa ay ku dhammaatey jawi ay farxadi ku dheehan tahay, kaa-soo Jaaliyaddii ka qeyb- gashey ay aad mabsuud uga wada ahaayeen, waxaanna Musharaxa Madaxweynaha xisbiga Kulmiye uu mid-mid u gacan qaadey Jaaliyaddii ka qeyb-gashey kulankaasi. Waxaa la filayaa in weftiga Musharaxa madaxweynaha Mudane Muuse biixi ay uu booqashooyin kale oo uu ku kala bixinayo Goboladda kale ku yaala dalka Ingiriiska oo ay ka mid yihiin Manchester, London , Bristol iyo Magalooyin kale. Adan Yusuf Elmi Birmingham, United Kingdom
Xulkii Kubada Cagta Ee Xaysimo Oo Qaadacay Ka Qaybgalka Koobka Gobolada Somaliland
SAWIRO:Jaaliyada Ingiriiska Oo Madaxweynaha Qaranka iyo Weftigii Uu Hogaaminayay Kulan Balaadhan La Yeelatay